Nhau - 2020 Hutano mwenje sosi mutungamiri - ShineOn anoenda newe
Gore ra2020 rakaona akawanda masimba majeure mune zvakasikwa. Mukuita kwekuchinjazve pakati pemunhu nemasikirwo, iyo Guangzhou International Lighting Exhibition, iyo yakamiswa kwemwedzi ingangoita mitatu, yakazopera. Shineon agara achitevedzera nzira yehunyanzvi ye 'magetsi ane mwenje'. Se 'mutungamiriri akagwinya ane simba', Shineon akaratidzira zvigadzirwa zviri kutarisa pakushandira vatengi 'zvido zvemhando yepamusoro yechiedza.
Pazhou Exhibition Hall 10.2 C02 ndiyo dumba reShineon, iro rinoratidza akasiyana akateedzana ezvekupenya zvigadzirwa.
Shineon akaronga izere-dhizimusi pfungwa yemwenje ine hutano kutanga kwa2016, uye akatungamira mukuratidzira zvizere-zvigadzirwa mumwaka wa2017.Izvi zvave zvichiramba zvichikwenenzverwa uye kukandirwa mumakina mana echinyakare akateedzana: Meso-anoteedzana akateedzana, Ziso-dziviriro nhevedzano. , Sunshine akateedzana, uye firimu neterevhizheni akateedzana. Iwo mana akateedzana anoenderana nezvinodiwa nevatengi uye zvinoenderana zviitiko zvekushandisa, zvichipa kutamba kune akasiyana mabhenefiti eiyo yakazara-spectrum mwenje akateedzana. Chinhu chinowanzojairika ishoma simba rekushandisa uye hutano.
* Iyo Ra98 Kaleidolite nhevedzano ine zvakanakira yekukwirira kwemavara kupa, kuvimbika kwakakwirira uye kuzadza kuzere.
* Iwo maziso ekudzivirira akateedzana ane hunhu hweakanaka kutenderera kuenderera uye yakaderera-simba bhuruu mwenje.
Iyo inowanzo shandiswa mukudzidzisa zviitiko kuchengetedza zvirinani kuona.
* Chiedza chezuva chine nani kupa ruvara nekuda kweayo violet spectrum iri padyo nezuva.
Inowanzo shandiswa muzviitiko zvakaita sekukura kwezvirimwa, kubereka uye antibacterial.
* Iyo studio magetsi akateedzana ane yakakwira TLCI index, inoenderana nemifananidzo yekuwedzera ekuwedzera emwenje mafomu.
Zvigadzirwa zveCBB ndezvimwe zvezvigadzirwa zveShineon. Kuomerera kune pfungwa yemhando yepamusoro, yepamusoro-soro, uye magetsi akajeka, akateedzera zvakateerana girazi aruminiyamu COB akateedzana, zvedongo COB dzakateedzana, yakazara-chakapetwa COB dzakateedzana, uye chinogadziriswa tembiricha COB akateedzana kusangana nevatengi vakasiyana Kunyorera zvinodiwa.
* Aluminium COB yakateedzana ine zvayakanakira yeakakwira mwenje kugona uye kwakanyanya kupisa kwekushisa;
* Ceramic COB akateedzana ane zvazvakanakira zvepamusoro kumanikidza kuramba uye hapana njodzi ye vulcanization;
* Iyo yakazara yakazara spectrum COB akateedzana ane zvakanakira yakaderera bhuruu kukuvara kwechiedza, yakakwira mwenje kushanda, uye ruvara kupa pasina kukanganisa
* Iyo tembiricha tembiricha COB akateedzana zvigadzirwa zvine zvakanakira yakafara simba kunyorera renji, yakafara ruvara tembiricha yekugadzirisa renji, yakakwira CRI uye yakakwira yakajeka kubudirira. Inogona kushandiswa mune dzakasiyana zviitiko senge mwenje wemba, zvitoro zvekuvheneka, mamuseum, nhandare, nezvimwe.
Ruvara shanduko yeSHINEON inogadziriswa tembiricha COB akateedzana mwenje
Muchiitiko chimwe chete, akasiyana maCRI mhedzisiro anoenzaniswa
Shineon's nyanzvi yeR & D timu inopa garandi yakasimba yezvigadzirwa kusiyanisa uye akawanda-mamiriro ekushandisa, akadai seUV akateedzera zvigadzirwa, nhare mbozha nhevedzano, DOB module nhevedzano, nezvimwe, izvo zvine huwandu hwakasiyana hwekushandisa pamusika. Kubva paShineon yakasimba yeR & D uye kugona kwekugadzira, isu tinogona kupa vatengi mhinduro dzakagadziriswa kune chaiwo magetsi.
Post nguva: Nov-11-2020